ဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ ဘက်တီးရီးယား
For decades scientists have managed to develop new medicines
ကူးစက်ရောဂါပိုး တွေထဲက ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ အကြောင်း ဒီတပတ်မှာပြောပြပေးမှာပါ။ မြန်မာအပါအဝင် တကမ္ဘာလုံး ခံစားနေရတဲ့ ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွါးစေတဲ့ပိုးဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်တဲ့ အတွက်ဆေးတွေ့ဖို့ မလွယ်တာကြောင့် ကာကွယ်ရေးကိုပဲ အဓိကဦးစားပေးဖို့ ဝါရင့်ဆေးပညာရှင် ဒေါက်တာတင့်ဆွေက ပြောပါတယ်။
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ။. ။“ဒီရောဂါက ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တာ။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါပေါင်း မြောက်များစွာ ရှိပါတယ်။ အအေးမိနှာစေး၊ ချောင်းဆိုးကစပြီးတော့၊ HIV လည်း ဗိုင်းရပ်စ်ပဲနော်၊ ကြွက်နို့လည်း ဗိုင်းရပ်စ်ပဲ။ အဲဒီင်္တော့ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါ အားလုံးကို ကုသနိုင်တဲ့ တနည်းအားဖြင့် တိတိကျကျ ပြောရရင် ဗိုင်းရပ်စ်ကို သေစေနိုင်တဲ့ဆေး၊ ကမ္ဘာမှာ အခုထိ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခု အသစ်ဖြစ်တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပိုးကို သေစေတဲ့ဆေး၊ ဘယ်လောက်ရှာရှာ၊ တွေ့နိုင်မယ်လို့တော့ ကျနော် မထင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကာကွယ်ရေးဟာ အရေးကြီးတယ်။ ပထမအချက်။ ဖြစ်လာလို့ ကူးစက်လာလို့ အသေအပျောက်နဲအောင်နဲ့၊ ခံစားရတာနဲအောင် ကုသတဲ့နည်းတွေ ဆေးတွေတော့ ကြိုးစားပြီး ရှာနေကြပါတယ်။”
မေး။. ။“ကူးစက်ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပိုးတွေ အကြောင်း ပြောပြပေးပါဆရာ။”
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ။. ။“ကူးစက်ရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့ပိုး အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယား ဆိုတဲ့ အကောင်တွေနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ဆိုတဲ့ အကောင်တွေကတော့ အများဆုံး ၂ မျိုးပေါ့။ နောက်ထပ်လည်း ရှိသေးတာပေါ့။ မှိုပိုး ခေါ်တဲ့ဟာတွေ၊ ကပ်ပါးကောင် ဆိုတဲ့ဟာတွေ၊ စသဖြင့်ပိုး အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အဲဒီထဲမှာ. ဘက်တီးရီးယား ဆိုတဲ့ပိုးကတော့ ဆေးရှိတယ်လို့ ကျနော်တို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒီဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို သေစေတဲ့ဆေးကတော့ ခုထိ မရှိဘူး။ သို့သော် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ကိစ္စတွေ၊ H1N1 ကိစ္စတွေ၊ swine flu ဆိုတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေပေါ့နော်။ တချို့ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတွေ အတွက် အသုံးကျနိုင်မယ့် ဆေးတွေတော့ ရှိပါတယ် ခင်ဗျ။ ဥပမာ၊ တမီလ် ဖလူး ဆိုတဲ့ ဆေးဆိုရင် swine flu ကိစ္စ H1N1 ကိစ္စတို့ အတွက် ရှိတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုထိတော့ ကိုဗစ် ၁၉ အတွက်ဆေး မရှိသေးဘူး။”
မေး။. ။“အရင်တုန်းက HIV က AIDS ရောဂါ ဖြစ်တယ်ဆိုရင်၊ ၁၉ ၈၀ ဝန်းကျင်လောက်က ပေါ့နော်။ ဒါတွေက သေဒဏ်ကျသလိုပဲ ငါတို့တော့ လောကကြီးထဲ နေရတော့မှာ မဟုတ်ဖူးဆိုပြီး အင်မတန်ပဲ ဒီရောဂါရှင်တွေက အားငယ်ရပါတယ် ဆရာ။ ဒါပေမယ့် အခုဆို HIV လူနာတွေ သက်တမ်းစေ့ နေနိုင်အောင် ဆေးတွေက တွေ့လာရပါပြီ။ အခု ကိုဗစ် ၁၉ ဖြစ်တဲ့လူတွေရော အဲဒီလို မျှော်လင့်လို့ရပါမလား ဆရာ။
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ။. ။“ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကာလမှာ HIV ပိုးတွေ့တဲ့ လူနာတိုင်းကို AIDS အထိမဖြစ်အောင် တားဆီးနိုင်တဲ့ဆေး၊ ကောင်းကောင်း ပေါ်နေပြီ။ တကမ္ဘာလုံးမှာလည်း သုံးစွဲနိုင်ပြီ။ တော်တော်များများ ဆိုရင် ဒါ အခမဲ့ ဝေနေတဲ့ အဆင့် ရောက်နေပြီဆိုတော့ လူကောင်းနီးပါးပေါ့။ နေနိုင်ကြတယ်။ အဲဒီတော့ ဆေးပညာရှင်တွေကလည်း အမျိုးမျိုးကြိုးစား နေမှာပါပဲ။ ဒီကိုဗစ် ၁၉ နဲ့ ပတ်သက်လို့။”
မေး။. ။“ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ ပိုးသတ်ဆေး ကို ဘယ်လိုတွေ့ရှိတယ် ဆိုတာကစပြီး ရှင်းပြပေးပါဆရာ”
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ။. ။“ကျနော်တို့ လူသားတွေကို ကူးစက်ရောဂါတွေ အကူးစက်ခံရတာ ဟိုးရှေးကတည်းကပါ။ ယဉ်ကျေးမှုကြီးတွေ စတဲ့ အီဂျစ်တို့ ဘေဘီလုံတို့ စသဖြင့်ပေါ့နော်။ အဲဒီ ကတည်းက ကူးစက်ရောဂါတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ဆေးတွေလည်း အဲဒီတုန်းက နည်းတွေနဲ့ ကုသခဲ့ကြတာပဲ။ အဲဒီတုန်းက အခုလို ဆေးစက်ရုံတွေ မရှိသေးတော့ သစ်သီး သစ်ရွက်တွေပေါ့။ သစ်ပင်တွေကို အားကိုးပြီး ဆေးကုပေးကြရတယ်။ ပျောက်တဲ့ဟာလည်း ပျောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ကနေ၊ ဘာဓါတ်ကနေ ပျောက်သလဲ ဆိုတာကို အခုလို သုတေသနတွေ မရှိတော့ မသိခဲ့ရပါဘူး။
အစဆုံး သိလာတဲ့ ပိုးသတ်ဆေး၊ (ပိုးသေဆေး၊ ပဋိဇီဝဆေး၊ anti biotic) ဘက်တီးရီးယား သေဆေး လို့ ပြောတာကတော့ အမှန်ဆုံးပါပဲ။ ဘက်တီးရီးယားကို သေစေတဲ့ ဆေးပါ။ အဲဒီဆေး စပေါ်တာက ၁၉ ရာစု အစပိုင်းက ပေါ်တာ။ ဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင် တဦးက စတွေ့တာပါ။ အရင်ဆုံး သုံးနိုင်တာကတော့ ကာလသားရောဂါ ကုသဆေးလို့ စပေါ်လာတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ၁၉ ၂၈ မှာ ဒေါက်တာဖလန်းမင်း (Alexander Fleming) က စတွေ့တဲ့ ပင်နစလင် (Penicillin) ကြောင့် ကျနော်တို့ တကမ္ဘာလုံးမှာ ဆေးကုတဲ့ သမိုင်းကြောင်းမှာ အကြီးအကျယ် အားထားစရာ ကျနော်တို့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကစပြီးတော့ ဒီပဋိဇီဝဆေး ခေါ် အန်တိုင်ဘိုင်အိုတစ် စပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်းမှာ အများကြီး အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ခင်ဗျ။ ကျနော်တို့ လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ကျနော်တို့ ဆရာဝန်စဖြစ်တဲ့ကာလ ဆေးကျောင်းသား စဖြစ်တဲ့ ကာလက ဆိုရင် ဒီ အန်တီ ဘိုင်အိုတစ် ခေါ်တဲ့ ပဋိဇီဝဆေးတွေ ကျနော်တို့ ဆေးရုံတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။”
မေး။. ။“ဒီ ပဋိဇီဝဆေး သုံးစွဲတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါ ဆရာ။”
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ။. ။“ဒီ ပဋိဇီဝ ဆေးဆိုတာက သက်ရှိ အရာ တခုက နေပြီး ထုတ်ယူပြီးတော့ လူသားတွေပေါ့နော်။ တိရိစ္ဆာန်တွေလည်း ပါတယ်။ ဒီ တခြား သက်ရှိလူတွေကို ကောင်းစေတဲ့ ဆေးကိုပဋိဇီဝဆေးလို့ ခေါ်တယ်။ အင်မတန်မှ ထိရောက်တယ်။ စွမ်းတယ် ဆိုသော်လည်းပဲ သတိထားစရာတွေ ရှိပါတယ်။ အားလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ သတိထားစရာ ကတော့ ဆေးယဉ်တာ။ တကမ္ဘာလုံးမှာ ဖြစ်နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်နဲ့ ဆိုင်တာ ဆို ဆေးယဉ်တဲ့ ငှက်ဖျားတွေ။ ထိုင်းနဲ့ကျနော်တို့မှာ အကြီးအကျယ် ခံနေရပါတယ်။”
မေး။. ။“ဒီလို ဆေးယဉ်တဲ့ ပြဿနာ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါလဲ ဆရာ”
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ။. ။“ဆေးယဉ်တာ မဖြစ်အောင် ဆိုရင် တစ်အချက်ကတော့ ပဋိဇီဝ ဆေးတွေကို စမ်းသပ် ကုသပေးတဲ့ ဆရာဝန်ညွှန်မှ သုံးရမယ်။ ညွှန်သလောက် သုံးရမယ်။ ဘယ်မီလီဂရမ် ဆိုရင် ဘယ်မီလီဂရမ်၊ ဘယ်နှစ်ရက် ဆိုရင် ဘယ်နှစ်ရက်။ မလိုအပ်ပဲ မသုံးရဘူး။ တော်တော်များများ မလိုအပ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အအေးမိ တုပ်ကွေးဆိုရင် လူတိုင်း နှစ်တိုင်း အများကြီး ဖြစ်နေကြ။ ဘာပဋိဇီဝ ဆေးမှ မလိုဘူး။ ဝမ်းဆိုတာလည်း ဘက်တီးရီးယား ကြောင့် ဖြစ်တာ မဟုတ်ဖူး။ ၉ ၀% က ဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့် ဖြစ်တာ။”
မေး။. ။“အဲဒီတော့ အဓိကက ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ခွဲ မသိကြတာပေါ့နော်ဆရာ။”
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ။. ။“ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ် နောက် တခြားပိုးတွေ ရောပေါ့နော်။ မှိုပိုးပေါ့နော်၊ fungus လို့ ခေါ်တဲ့ဟာတွေ၊ သူက သူ့ဆေးနဲ့သူ။ နောက် သံကောင်လိုဆိုတာမျိုးက တမျိုးပေါ့။ ငှက်ဖျား ဆိုတာက ပိုးတမျိုး။ အဲဒီတော့ သူ့ပိုး အလိုက် ကျနော်တို့ ဆေးရွေးရတယ်။ anti biotic ခေါ် ပဋိဇီဝ ဆေးကတော့ ဘက်တီးရီးယား အတွက်။”
မေး။. ။“ကိုဗစ် ၁၉ က. ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်တာ မဟုတ်ဖူး ဆိုတာကို နားလည်ပြီးတော့ ဘက်တီးရီးယာအတွက် သောက်ရတဲ့ ပိုးသတ်ဆေးလိုမျိုးကို မသုံမိဖို့ ပေါ့နော် ဆရာ။”
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ။. ။“ဟုတ်ကဲ့ အဲဒါ တော်တော်တော့ အရေးကြီးတယ် ခင်ဗျ။ ဒီ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ဘယ် antibiotic ဘယ် ပဋိဇီဝ ဆေးနဲ့မှ မရနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့် ကိုယ်ခံအားကောင်း နေအောင် နေတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်ခံအား ကောင်းအောင် ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် ဆေးသောက်ရတာ မဟုတ်ဖူး။ ကိုယ်ခံအား ကောင်းတဲ့ ဆေး ဆိုတာ မရှိဘူး။ ကျနော်တို့ ပုံမှန်ပါပဲ။ လူတွေ ထမင်း ၂ နပ်ဆို ဒီ ထမင်း ၂ နပ်ကို အာဟာရပြည့်ဝအောင်။ အဟာရ ဆိုတာက လုံလောက်တာနဲ့ မျှတတာ။ ၂ ခုပဲ။ အပိုတွေ မလိုဘူး။ အားဆေးတွေ မလိုဘူး။ တကယ့် အခြေခံကျတဲ့ ကျန်းမာရေးအသိပေါ့နော်။ အဟာရဓါတ်က လူနေမှုပုံစံ။ မလိုအပ်ပဲနဲ့ ရောဂါ ဖြစ်လောက်တဲ့ နေရာမျိုး မသွားနဲ့ ပေါ့နော်။ နောက်တခါ ချောင်းဆိုးတာ။ ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မှာ ပထမဦးဆုံး ကျန်းမာရေး အသိပေးမှာက ချောင်းဆိုးတဲ့ကိစ္စ။ အဲဒီတော့ ချောင်းဆိုးရင် ကျနော်တို့ တဒေါင်ဆစ် ထဲမှာ ချောင်းဆိုးတဲ့ယဉ်ကျေးမှု။ ချောင်းဆိုးတာရော၊ နှာချေတာရော အလေ့အကျင့် လုပ်ကြဖို့ပါပဲ။”
ကူးစကျရောဂါပိုး တှထေဲက ဗိုငျးရပျဈနဲ့ ဘကျတီးရီးယားပိုးတှေ အကွောငျး ဒီတပတျမှာပွောပွပေးမှာပါ။ မွနျမာအပါအဝငျ တကမ်ဘာလုံး ခံစားနရေတဲ့ ကိုဗဈ ၁၉ ကပျရောဂါဖွဈပှါးစတေဲ့ပိုးဟာ ဗိုငျးရပျဈပိုးဖွဈတဲ့ အတှကျဆေးတှဖေို့ မလှယျတာကွောငျ့ ကာကှယျရေးကိုပဲ အဓိကဦးစားပေးဖို့ ဝါရငျ့ဆေးပညာရှငျ ဒေါကျတာတငျ့ဆှကေ ပွောပါတယျ။
ဒေါကျတာတငျ့ဆှေ။.။“ဒီရောဂါက ဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ဖွဈတာ။ ဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ရောဂါပေါငျး မွောကျမြားစှာ ရှိပါတယျ။ အအေးမိနှာစေး၊ ခြောငျးဆိုးကစပွီးတော့၊ HIV လညျး ဗိုငျးရပျဈပဲနျော၊ ကွှကျနို့လညျး ဗိုငျးရပျဈပဲ။ အဲဒီင်္တော့ ဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ ဖွဈတဲ့ ရောဂါ အားလုံးကို ကုသနိုငျတဲ့ တနညျးအားဖွငျ့ တိတိကကြ ပွောရရငျ ဗိုငျးရပျဈကို သစေနေိုငျတဲ့ဆေး၊ ကမ်ဘာမှာ အခုထိ မရှိပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အခု အသဈဖွဈတဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ပိုးကို သစေတေဲ့ဆေး၊ ဘယျလောကျရှာရှာ၊ တှနေို့ငျမယျလို့တော့ ကနြျော မထငျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ကာကှယျရေးဟာ အရေးကွီးတယျ။ ပထမအခကျြ။ ဖွဈလာလို့ ကူးစကျလာလို့ အသအေပြောကျနဲအောငျနဲ့၊ ခံစားရတာနဲအောငျ ကုသတဲ့နညျးတှေ ဆေးတှတေော့ ကွိုးစားပွီး ရှာနကွေပါတယျ။”
မေး။.။“ကူးစကျရောဂါနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ပိုးတှေ အကွောငျး ပွောပွပေးပါဆရာ။”
ဒေါကျတာတငျ့ဆှေ။. ။“ကူးစကျရောဂါကို ဖွဈစတေဲ့ပိုး အမြိုးမြိုး ရှိပါတယျ။ ဘကျတီးရီးယား ဆိုတဲ့ အကောငျတှနေဲ့ ဗိုငျးရပျဈ ဆိုတဲ့ အကောငျတှကေတော့ အမြားဆုံး ၂ မြိုးပေါ့။ နောကျထပျလညျး ရှိသေးတာပေါ့။ မှိုပိုး ချေါတဲ့ဟာတှေ၊ ကပျပါးကောငျ ဆိုတဲ့ဟာတှေ၊ စသဖွငျ့ပိုး အမြိုးမြိုးရှိတယျ။ အဲဒီထဲမှာ. ဘကျတီးရီးယား ဆိုတဲ့ပိုးကတော့ ဆေးရှိတယျလို့ ကနြျောတို့ ပွောနိုငျပါတယျ။
ဒီဗိုငျးရပျဈနဲ့ ပတျသကျရငျတော့ ဒီဗိုငျးရပျဈကို သစေတေဲ့ဆေးကတော့ ခုထိ မရှိဘူး။ သို့သျော ကွကျငှကျတုပျကှေး ကိစ်စတှေ၊ H1N1 ကိစ်စတှေ၊ swine flu ဆိုတဲ့ ဗိုငျးရပျဈတှပေေါ့နျော။ တခြို့ဗိုငျးရပျဈရောဂါတှေ အတှကျ အသုံးကနြိုငျမယျ့ ဆေးတှတေော့ ရှိပါတယျ ခငျဗြ။ ဥပမာ၊ တမီလျ ဖလူး ဆိုတဲ့ ဆေးဆိုရငျ swine flu ကိစ်စ H1N1 ကိစ်စတို့ အတှကျ ရှိတယျပေါ့။ ဒါပမေယျ့ အခုထိတော့ ကိုဗဈ ၁၉ အတှကျဆေး မရှိသေးဘူး။”
မေး။.။“အရငျတုနျးက HIV က AIDS ရောဂါ ဖွဈတယျဆိုရငျ၊ ၁၉ ၈၀ ဝနျးကငျြလောကျက ပေါ့နျော။ ဒါတှကေ သဒေဏျကသြလိုပဲ ငါတို့တော့ လောကကွီးထဲ နရေတော့မှာ မဟုတျဖူးဆိုပွီး အငျမတနျပဲ ဒီရောဂါရှငျတှကေ အားငယျရပါတယျ ဆရာ။ ဒါပမေယျ့ အခုဆို HIV လူနာတှေ သကျတမျးစေ့ နနေိုငျအောငျ ဆေးတှကေ တှလေ့ာရပါပွီ။ အခု ကိုဗဈ ၁၉ ဖွဈတဲ့လူတှရေော အဲဒီလို မေြျှာလငျ့လို့ရပါမလား ဆရာ။
ဒေါကျတာတငျ့ဆှေ။.။“ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီကနေ့ ကာလမှာ HIV ပိုးတှတေဲ့ လူနာတိုငျးကို AIDS အထိမဖွဈအောငျ တားဆီးနိုငျတဲ့ဆေး၊ ကောငျးကောငျး ပျေါနပွေီ။ တကမ်ဘာလုံးမှာလညျး သုံးစှဲနိုငျပွီ။ တျောတျောမြားမြား ဆိုရငျ ဒါ အခမဲ့ ဝနေတေဲ့ အဆငျ့ ရောကျနပွေီဆိုတော့ လူကောငျးနီးပါးပေါ့။ နနေိုငျကွတယျ။ အဲဒီတော့ ဆေးပညာရှငျတှကေလညျး အမြိုးမြိုးကွိုးစား နမှောပါပဲ။ ဒီကိုဗဈ ၁၉ နဲ့ ပတျသကျလို့။”
မေး။.။“ဟုတျကဲ့ဆရာ။ ပိုးသတျဆေး ကို ဘယျလိုတှရှေိ့တယျ ဆိုတာကစပွီး ရှငျးပွပေးပါဆရာ”
ဒေါကျတာတငျ့ဆှေ။. ။“ကနြျောတို့ လူသားတှကေို ကူးစကျရောဂါတှေ အကူးစကျခံရတာ ဟိုးရှေးကတညျးကပါ။ ယဉျကြေးမှုကွီးတှေ စတဲ့ အီဂဈြတို့ ဘဘေီလုံတို့ စသဖွငျ့ပေါ့နျော။ အဲဒီ ကတညျးက ကူးစကျရောဂါတှေ ရှိခဲ့တယျ။ ဆေးတှလေညျး အဲဒီတုနျးက နညျးတှနေဲ့ ကုသခဲ့ကွတာပဲ။ အဲဒီတုနျးက အခုလို ဆေးစကျရုံတှေ မရှိသေးတော့ သဈသီး သဈရှကျတှပေေါ့။ သဈပငျတှကေို အားကိုးပွီး ဆေးကုပေးကွရတယျ။ ပြောကျတဲ့ဟာလညျး ပြောကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျကနေ၊ ဘာဓါတျကနေ ပြောကျသလဲ ဆိုတာကို အခုလို သုတသေနတှေ မရှိတော့ မသိခဲ့ရပါဘူး။
အစဆုံး သိလာတဲ့ ပိုးသတျဆေး၊ (ပိုးသဆေေး၊ ပဋိဇီဝဆေး၊ anti biotic) ဘကျတီးရီးယား သဆေေး လို့ ပွောတာကတော့ အမှနျဆုံးပါပဲ။ ဘကျတီးရီးယားကို သစေတေဲ့ ဆေးပါ။ အဲဒီဆေး စပျေါတာက ၁၉ ရာစု အစပိုငျးက ပျေါတာ။ ဂြာမနျသိပ်ပံပညာရှငျ တဦးက စတှတေ့ာပါ။ အရငျဆုံး သုံးနိုငျတာကတော့ ကာလသားရောဂါ ကုသဆေးလို့ စပျေါလာတယျ။ အဲဒီနောကျမှာ ၁၉ ၂၈ မှာ ဒေါကျတာဖလနျးမငျး (Alexander Fleming) က စတှတေဲ့ ပငျနစလငျ (Penicillin) ကွောငျ့ ကနြျောတို့ တကမ်ဘာလုံးမှာ ဆေးကုတဲ့ သမိုငျးကွောငျးမှာ အကွီးအကယျြ အားထားစရာ ကနြျောတို့ တှခေဲ့ပါတယျ။ အဲဒီကစပွီးတော့ ဒီပဋိဇီဝဆေး ချေါ အနျတိုငျဘိုငျအိုတဈ စပါတယျခငျဗြ။ ဒုတိယ ကမ်ဘာစဈ အတှငျးမှာ အမြားကွီး အထောကျအကူ ပွုပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး ဒီအတိုငျးပဲ ခငျဗြ။ ကနြျောတို့ လှတျလပျရေး ရပွီး ကနြျောတို့ ဆရာဝနျစဖွဈတဲ့ကာလ ဆေးကြောငျးသား စဖွဈတဲ့ ကာလက ဆိုရငျ ဒီ အနျတီ ဘိုငျအိုတဈ ချေါတဲ့ ပဋိဇီဝဆေးတှေ ကနြျောတို့ ဆေးရုံတိုငျးမှာ ရှိပါတယျ။”
မေး။. ။“ဒီ ပဋိဇီဝဆေး သုံးစှဲတာနဲ့ ပတျသကျပွီးပွောပွပေးပါ ဆရာ။”
ဒေါကျတာတငျ့ဆှေ။.။“ဒီ ပဋိဇီဝ ဆေးဆိုတာက သကျရှိ အရာ တခုက နပွေီး ထုတျယူပွီးတော့ လူသားတှပေေါ့နျော။ တိရိစ်ဆာနျတှလေညျး ပါတယျ။ ဒီ တခွား သကျရှိလူတှကေို ကောငျးစတေဲ့ ဆေးကိုပဋိဇီဝဆေးလို့ ချေါတယျ။ အငျမတနျမှ ထိရောကျတယျ။ စှမျးတယျ ဆိုသျောလညျးပဲ သတိထားစရာတှေ ရှိပါတယျ။ အားလုံးနဲ့ ဆိုငျတဲ့ သတိထားစရာ ကတော့ ဆေးယဉျတာ။ တကမ်ဘာလုံးမှာ ဖွဈနပေါတယျ။ မွနျမာပွညျနဲ့ ဆိုငျတာ ဆို ဆေးယဉျတဲ့ ငှကျဖြားတှေ။ ထိုငျးနဲ့ကနြျောတို့မှာ အကွီးအကယျြ ခံနရေပါတယျ။”
မေး။.။“ဒီလို ဆေးယဉျတဲ့ ပွဿနာ မဖွဈအောငျ ဘယျလိုလုပျသငျ့ပါလဲ ဆရာ”
ဒေါကျတာတငျ့ဆှေ။.။“ဆေးယဉျတာ မဖွဈအောငျ ဆိုရငျ တဈအခကျြကတော့ ပဋိဇီဝ ဆေးတှကေို စမျးသပျ ကုသပေးတဲ့ ဆရာဝနျညှနျမှ သုံးရမယျ။ ညှနျသလောကျ သုံးရမယျ။ ဘယျမီလီဂရမျ ဆိုရငျ ဘယျမီလီဂရမျ၊ ဘယျနှဈရကျ ဆိုရငျ ဘယျနှဈရကျ။ မလိုအပျပဲ မသုံးရဘူး။ တျောတျောမြားမြား မလိုအပျတာတှေ ရှိပါတယျ။ အအေးမိ တုပျကှေးဆိုရငျ လူတိုငျး နှဈတိုငျး အမြားကွီး ဖွဈနကွေ။ ဘာပဋိဇီဝ ဆေးမှ မလိုဘူး။ ဝမျးဆိုတာလညျး ဘကျတီးရီးယား ကွောငျ့ ဖွဈတာ မဟုတျဖူး။ ၉ ဝ% က ဗိုငျးရပျဈ ကွောငျ့ ဖွဈတာ။”
မေး။.။“အဲဒီတော့ အဓိကက ဘကျတီးရီးယားနဲ့ ဗိုငျးရပျဈကို ခှဲ မသိကွတာပေါ့နျောဆရာ။”
ဒေါကျတာတငျ့ဆှေ။.။“ဟုတျကဲ့ခငျဗြ။ ဘကျတီးရီးယား၊ ဗိုငျးရပျဈ နောကျ တခွားပိုးတှေ ရောပေါ့နျော။ မှိုပိုးပေါ့နျော၊ fungus လို့ ချေါတဲ့ဟာတှေ၊ သူက သူ့ဆေးနဲ့သူ။ နောကျ သံကောငျလိုဆိုတာမြိုးက တမြိုးပေါ့။ ငှကျဖြား ဆိုတာက ပိုးတမြိုး။ အဲဒီတော့ သူ့ပိုး အလိုကျ ကနြျောတို့ ဆေးရှေးရတယျ။ anti biotic ချေါ ပဋိဇီဝ ဆေးကတော့ ဘကျတီးရီးယား အတှကျ။”
မေး။.။“ကိုဗဈ ၁၉ က. ဘကျတီးရီးယားကွောငျ့ ဖွဈတာ မဟုတျဖူး ဆိုတာကို နားလညျပွီးတော့ ဘကျတီးရီးယာအတှကျ သောကျရတဲ့ ပိုးသတျဆေးလိုမြိုးကို မသုံမိဖို့ ပေါ့နျော ဆရာ။”
ဒေါကျတာတငျ့ဆှေ။. ။“ဟုတျကဲ့ အဲဒါ တျောတျောတော့ အရေးကွီးတယျ ခငျဗြ။ ဒီ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကို ဘယျ antibiotic ဘယျ ပဋိဇီဝ ဆေးနဲ့မှ မရနိုငျပါဘူး။ ကိုယျ့ ကိုယျခံအားကောငျး နအေောငျ နတေတျဖို့ လိုပါတယျ။ ကိုယျခံအား ကောငျးအောငျ ဘာလုပျမလဲဆိုရငျ ဆေးသောကျရတာ မဟုတျဖူး။ ကိုယျခံအား ကောငျးတဲ့ ဆေး ဆိုတာ မရှိဘူး။ ကနြျောတို့ ပုံမှနျပါပဲ။ လူတှေ ထမငျး ၂ နပျဆို ဒီ ထမငျး ၂ နပျကို အာဟာရပွညျ့ဝအောငျ။ အဟာရ ဆိုတာက လုံလောကျတာနဲ့ မြှတတာ။ ၂ ခုပဲ။ အပိုတှေ မလိုဘူး။ အားဆေးတှေ မလိုဘူး။ တကယျ့ အခွခေံကတြဲ့ ကနျြးမာရေးအသိပေါ့နျော။ အဟာရဓါတျက လူနမှေုပုံစံ။ မလိုအပျပဲနဲ့ ရောဂါ ဖွဈလောကျတဲ့ နရောမြိုး မသှားနဲ့ ပေါ့နျော။ နောကျတခါ ခြောငျးဆိုးတာ။ ဒီကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈမှာ ပထမဦးဆုံး ကနျြးမာရေး အသိပေးမှာက ခြောငျးဆိုးတဲ့ကိစ်စ။ အဲဒီတော့ ခြောငျးဆိုးရငျ ကနြျောတို့ တဒေါငျဆဈ ထဲမှာ ခြောငျးဆိုးတဲ့ယဉျကြေးမှု။ ခြောငျးဆိုးတာရော၊ နှာခတြောရော အလအေ့ကငျြ့ လုပျကွဖို့ပါပဲ။”